SH Dirir: “Nebigu NNKH wuu u duceeyey dadka (ganacsatada) ummadooda u naxariista..” – WARSOOR
May 24, 2019 May 24, 2019 Mohamed IbrahimComment(0)
May 7, 2019 May 7, 2019 Mohamed Ibrahim
Ramadaanta – (warsoor) – Sheekh Maxamed Cumar Dirir ayaa kalmadiisii maanta ku soo qaaday qodobadda buriya qofka soonkiisa ee loo baahan yahay inuu qofku ka taxadiro. Halkan ka daawo casharkan:
Sunnayaasha Soonka Q. 1aad
May 28, 2017 Mohamed Ibrahim
Idilkiin Ramadaan kariim meel kasta oo aad joogtaan. Waxa aanu halkan idiinku soo gudninaynaa qaybtii 1aad ee Sunnayaasha Soonka oo dhawr qaybood oo taxane ah ka kooban. Waxaana ay qayb ka yihiin taxanaha duruusta Ramadaanta oo uu idiinku talo galay barnaamijka MIDHAHA DIINTU. Duruustan diiniga ah ee Ramadaanta ku saabsanna Waxa duubtay maktabadda Al-fajri oo […]
Sheekh Dirir: Maalin walba Wax Uskagaysan ma Horistaagi Karayne, aynu Shareecada Ilaahay isku Xukunkeeda Doorno
September 21, 2018 Mohamed Ibrahim
“Ilaahay waxyigiisa inaynu raacnaa, maaha ikhtiyaari, waa waajib. “Nimankii sameeyey xeerkan waxay ku bilaabeen in xeerku waafaqsan yahay shareecada islaamka, mana waafaqsana, oo Ilaahay bay ka been-abuurteen. Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir. Hargeysa- Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir, ayaa sheegay inaan ummadu maalin walba xeer xiimaya oo xun ma horjoogsan karine, ay waxyiga samaawiga ee […]
January 21, 2020 January 21, 2020 Mohamed IbrahimComment(0)
TURKEY – (WARSOOR) – Turkish President Recep Tayyip Erdogan has said that Somalia invited Turkey to explore for oil in its waters, private national broadcaster NTV reported. Turkey has been a significant source of aid to Somalia following a famine in 2011. Turkish engineers have helped to build infrastructure in Somalia, businesses have invested in the country and Turkish officers have […]
January 19, 2020 January 19, 2020 Mohamed IbrahimComment(0)
January 15, 2020 January 15, 2020 Mohamed IbrahimComment(0)